ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး နိုင်ငံသားတိုင်း ထိုးပေးရေးအတွက် ဒေါ်လာတစ်သန်း အလှူရှင်တစ်ဦး ပေါ်လာပြန်ပြီ …. – Maythadin
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး နိုင်ငံသားတိုင်း ထိုးပေးရေးအတွက် ဒေါ်လာတစ်သန်း အလှူရှင်တစ်ဦး ပေါ်လာပြန်ပြီကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန် နိုင်ငံတော်သို့ မန္တလေးမြို့ ဒေါ်စန်းကြူ (ဒုံးပျံဂျုံစက် ) Capital Diamond Star Foundation မှအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁)သန်း လှူဒါန်းပါသည်.
စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်ကလည်းကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအတွက်မန်းတိုင်းအစိုးရကြီးကို အလှုငွေကျပ်သိန်း(၁၀၀၀)လှူဒါန်းထားပါသေးတယ်..Capital Diamond Star Group မှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူရရှိရေး ရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲမှု ဆပ်ကော်မတီသို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ ( ၁ ) သန်းလှူဒါန်းခြင်း
ကိုဗစ်ကို အစိုးရနဲ့ ပြည်သူ ပူးပေါင်းပြီး တိုက်နေတာ တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်။သမာအာဇီဝနဲ့ ရှာထားတဲ့ငွေကို အရေးကြုံလာချိန်မှာ ပြည်သူ့အတွက် ပြန်လှူပေးတာ ကျေးဇူးအထူးတင်မိပါတယ်။ဒေါ်စန်းကြူရဲ့ မြင့်မြတ်လှတဲ့ အလှူအတွက် သာဓု သုံးကြိမ် ခေါ်မိပါတယ်။
သာဓု … သာဓု … သာဓုပါ …
ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး နိုင္ငံသားတိုင္း ထိုးေပးေရးအတြက္ ေဒၚလာတစ္သန္း အလႉရွင္တစ္ဦး ေပၚလာျပန္ၿပီကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆးဝယ္ယူရန္ နိုင္ငံေတာ္သို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေဒၚစန္းၾကဴ (ဒုံးပ်ံဂ်ဳံစက္ ) Capital Diamond Star Foundation မွအေမရိကန္ေဒၚလာ(၁)သန္း လႉဒါန္းပါသည္.
စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ကလည္းကိုဗစ္ကာကြယ္ေရးအတြက္မန္းတိုင္းအစိုးရႀကီးကို အလႈေငြက်ပ္သိန္း(၁၀၀၀)လႉဒါန္းထားပါေသးတယ္..Capital Diamond Star Group မွ COVID-19 ကာကြယ္ေဆး ဝယ္ယူရရွိေရး ရန္ပုံေငြ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဆပ္ေကာ္မတီသို႔အေမရိကန္ေဒၚလာ ( ၁ ) သန္းလႉဒါန္းျခင္း
ကိုဗစ္ကို အစိုးရနဲ႕ ျပည္သူ ပူးေပါင္းၿပီး တိုက္ေနတာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္။သမာအာဇီဝနဲ႕ ရွာထားတဲ့ေငြကို အေရးႀကဳံလာခ်ိန္မွာ ျပည္သူ႕အတြက္ ျပန္လႉေပးတာ ေက်းဇူးအထူးတင္မိပါတယ္။ေဒၚစန္းၾကဴရဲ႕ ျမင့္ျမတ္လွတဲ့ အလႉအတြက္ သာဓု သုံးႀကိမ္ ေခၚမိပါတယ္။
ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကြည်ဝင်း COVID-19 ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်
ထိုင်းထီ ပထမဆု ဘတ် (၆) သန်းကို မြန်မာပြည်ထဲမှ ဇနီးမောင်နှံ ဆွတ်ခူး
မြန်မာ့လူဦးရေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ရရှိဖို့ ဗြိတိန်က ကူညီပေးမည်